Ny fampiasana sary amin'ny fomba mahomby an-tserasera dia hampitombo ny varotra e-varotrao, ny fahafaha-mivoaka na ny orinasanao. Raha miasa eo amin'ny sehatry ny fakana sary, sakafo, lamaody na fampiroboroboana hetsika ny orinasanao dia efa miasa ianao hizara atiny maso an-tserasera. Manjakazaka amin'ny Internet ny sary - manomboka amin'ny fahana Facebook hatramin'ny Pinterest. Ny sary dia voaporofo fa mitondra tsindry, fizarana, fahatakarana ary fiovam-po. Ny olana amin'ny orinasa maro dia ny fomba fitantanana loharanom-pahalalana sary - avy
RSS mifanohitra amin'ny mailaka: jery marketing
Talata, Jolay 24, 2007 Alakamisy Janoary 5, 2017 Douglas Karr
Dinika efa mihantitra izy ity, saingy amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny Outlook 2007 ny RSS - dia manohy mampitaha ny RSS sy ny mailaka ho an'ny Marketing Marketing an-tserasera (miaraka amina SMS eo akaiky eo) ny indostrian'ny Internet. Raha ny fomba fijerin'ny fitantanana votoaty dia maro amin'ireo indostria ao an-toerana no mihevitra ireo rehetra ireo ho karazana 'output'. Tena fomba fijery tsy misy dikany izany. Mitovy amin'ny fijerena ny Direct Mail sy ny Bulletin Board izany satria ianao
Fametahana bilaogy: Ilay lahatsoratra miankina amin'ny tena
Alatsinainy, Jolay 9, 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Ny tippee ho ahy manaraka dia i Ryan izay mitantana bilaogy mpandraharaha, antsoina hoe The Self Reliant Post. The Self-reliant Post dia bilaogy iray momba ny fomba ahazoana vola amin'ny orinasan-trano an-tserasera sy ny eritreritra hafa mifandraika amin'izany. (Nesoriko avy tao amin'ny pejy About io fehezanteny farany io.) Ireto misy toro-hevitra amin'ny bilaoginao: Doh! Nahazo spam fotsiny ve aho? Rehefa tsikaritro voalohany ny anaran'ny sehatr'asa miaraka amin'ireo hyphen rehetra ireo, izany no eritreritra voalohany nahagaga ahy.
Na dia afaka mahita HTML aza ny zanak'olombelona, ​​mba hahafahan'ny sehatra rindrambaiko mandany atiny, dia tsy maintsy amin'ny endrika azo vakina izany. Ny endrika izay fenitra an-tserasera dia RSS ary rehefa mamoaka ny hafatrao farany amin'ity endrika ity ianao dia antsoina hoe fahana anao. Miaraka amin'ny sehatra toy ny WordPress, dia vokarinao ho azy ny sakafonao ary tsy mila manao zavatra akory ianao. Alao an-tsaina hoe azonao esorina daholo ireo singa famolavolana ny tranokalanao ary hanome sakafo fotsiny